Ciidanka DANAB iyo gor-gor oo siwada jir ah ULa Wareegay Deegaano hoos-yimaada Gobolka Shabeellaha Hoose - Awdinle Online
Ciidanka DANAB iyo gor-gor oo siwada jir ah ULa Wareegay Deegaano hoos-yimaada Gobolka Shabeellaha Hoose
Ciidamadda kumaandooska Xoogga dalka ee Danab iyo gor-gor oo siwada jir ah u howlgalayay ayaa Al-shabaab kala wareegay degaanada jilib marko iyo Gendershe oo hoos-yimaado degmada marko ee Xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose.
Howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa ujeedkiisu ahaa in Al-shabaab laga xoreeyo dhulka xeebta ee u dhexeeyo degaanka Jasiira iyo degmada marko.
Taliyaha guutada 16-aad kumaandooska xoogga dalka danab G/le Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa Idaacadda Ciidamadda Qalabaka Sida u sheegay in ciidanka intii ay howlgalka xoreeynta ah kuguda jireen ay ku dileen laba Sarkaal oo la xusay in Al-shabaab ay u qaabilsanaayeen degaanada xeebta ah ee ay ciidamadda la wareegeen.
Taliye G/le Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa saraakiisha la dilay waxaa uu Magacyadooda ku kala sheegay xeroow, iyo ciise yare, waa sida uu hadalka u dhigay.
Ciidamadda kumaandooska xoogga dalka ee danab iyo gor-gor ayaa haatan waxay wadaan howlgalo baaritaano ah oo ay ku xaqijinayaan amaanka degaanada jilib marfko iyo gendershe ee Gobolka shabeellaha Hoose.
Previous articleDr. Aadan Kaynaan Wehliye oo loo doortay xil sare
Next articleMaxaa looga hadley Kulankii Dowladda Federaalka iyo maamul Goboleedyada